ဆံပင် Archives - Latest Myanmar News
ဆံပင်တွေပါးလွှာပြီး ပျက်စီးသူများအတွက် ဆံပင် အုံပိုထူစေမယ့် နည်းလမ်း (၈)ခု ဆံပင်ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေလိုပဲ အထူးဂရုစိုက်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ ဆံပင်တွေပါးလွှာပြီး ပျက်စီးသူများအတွက် ဆံပင်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်မယ်နော် (၁) ကြက်ဥ ၊ဒိန်ချဉ်တို့ဖြင့် ပေါင်းတင်ပါ ဥတွေမှာ ပရိုတိန်း၊ ဘိုင်အိုတင်းနှင့်် ဗီတာမင် B11 တို့ ကြွယ်ဝတာကြောင့် ပါးလွှာပြီး အဆီပြန်တဲ့ဆံပင်ကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။ ကြက်ဥကို ဂရိဒိန်ချဉ်နှင့် ရောပါ။ ဆံပင်မှာလိမ်းပြီး တစ်နာရီလောက်ထားပါ။ ပြီးမှ ခေါင်းလျှာ်ပေးပါ။ (၂) gelatin အမှုန့်ကို essential oil နှင့်ရောပါ ဆံပင်တွေပါးလွှာပြီး ပျက်စီးသူများအတွက် ဆံပင် အုံပိုထူစေမယ့် နည်းလမ်း (၈)ခု ဆံပင်ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေလိုပဲ အထူးဂရုစိုက်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ … Read more
Categories Uncategorized Tags ဆံပင် Leaveacomment
May 9, 2021 by Latest Myanmar News
စ်တို့ရေ…. မင်္ဂလာပါရှင် အရင်အပတ်တွေ​က skin care နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ sharing လုပ်ပေးခဲ့တာမို့ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ တောင်းဆိုမှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ hair care/ hair treatment လုပ်နည်းလေး ကို တင်ပေးပါမယ်နော် Irene ရဲ့ လုပ်ထုံးအတိုင်းပဲ သဘာဝပစ္စည်း/chemical မများတဲ့ product လေးတွေနဲ့ Irene ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းလေးမို့ စိတ်ချလက်ချ လိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်နော် “Hair Care/Treatment ” ပါဝင်ပစ္စည်း ကြက်ဥ – ၁ လုံး ကြက်သွန်နီ – ၁ လုံး သံပုရာသီး – ၁ လုံး သံလွင်ဆီ – ထမင်းစားဇွန်း ၁-၂ဇွန်း Vaseline – အနည်းငယ် … Read more
Categories အလွအပ ႏွင္႔ က်န္းမာေရး Tags ဆံပင်
၂လအတွင်း ဆံပင် ငါးလက်မအထိ အရှည်မြန်လာစေရန်
April 24, 2021 by Latest Myanmar News
၂လအတွင်း ဆံပင် ငါးလက်မအထိ အရှည်မြန်လာစေ သင်က ၂ လအတွင်း ဆံပင်ကို နဂိုထက် ပိုမြန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအကြောင်းအရာက သင့်အတွက်ပါပဲ။ ဆံပင်က အရှည်မြန်ဖို့ အချိန်ယူရပါတယ်။ လုံလောက်တဲ့ အာဟာရ စားသောက်မှု ပုံစံ နဲ့ ဆံပင်ကို ဂရုစိုက်ပေးမှ ဆံပင်အရှည်မြန်မှာပါ။ သင်က ဆံသား ဂရုစိုက်မှု နဲ့ ဆံပင်ပိုရှည်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းအတွက် ပါဝင်ပစ္စည်း (၂) မျိုးပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့- ဆန်ဆေးရည် လိမ္မော်သီးအခွံ ပြုလုပ်ပုံကတော့ ဆန်ကို အညစ်ကြေးတွေ ပါသွားအောင် ရေဆေးပေးရပါမယ်။ နှစ်ခါ ဝန်းကျင်လောက် ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်တဲ့ ပမာဏ တစ်ခွက်စာကို စစ်ထုတ်ပေးရပါမယ်။ ဆန်ဆေးရည်ကို အကြည်ပုံစံ ရသွားတဲ့အထိ ပိုမဆေးသင့်ပါဘူး။ … Read more
ဆိုင်သွားစရာမလိုပဲ ဆံပင်ကို အိစက်ပြီးပျော့ပျောင်းသွားချင်သူတွေအတွက် သဘာဝနည်းလမ်းလေးပါ
ဆိုင်သွားစရာမလိုပဲ ဆံပင်ကို အိစက်ပြီးပျော့ပျောင်းသွားချင်သူတွေအတွက် သဘာဝနည်းလမ်းလေးပါ ပျက်ဆီးနေတဲ့ဆံသားတွေအတွက် ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးမယ် ဆံသားခြောက်တဲ့သူတွေအတွက် အထူးကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ ငှက်ပျောသီး တစ်လုံး ၊ ကြက်ဥတစ်လုံး ၊ ပျားရည် ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်း ‼ သုံးမျိုးကို ရောချေပြီး ဆံသားကို အရင်းမှ အဖျားထိ လိမ်းပေးပါ တစ်နာရီထိထားလို့ရပါတယ် ခြောက်တဲ့အထိထားလဲရပါတယ် ပြီးရင် လျှော်နေကျခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ လျှော်လိုက်ရုံပါပဲ ပါဝင်ပစ္စည်းသုံးခုလုံးက သဘာဝပစ္စည်းတွေပဲမို့ ဆိုးကျိုးဖြစ်မှာ ပူစရာမလိုပါဘူးနော် ငှက်ပျောသီးက ဆံသားကို အာဟာရဓာတ်တွေဖြည့်ပေးပြီး ဆံပင်တွေ ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေတယ် ပျားရည်က ဦးရေပြားက ဆဲလ်သေတွေဖယ်ရှားပြီး ဦးရေပြားကိုအစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးတယ် ဆံသားတွေကို အိစက်စေတယ် ကြက်ဥကလဲ ဆံသားတွေကို ကျန်းမာစေတယ် ဆံသားကို အားဖြည့်ပေးတယ် ဒါကြောင့် ဆံပင်အုံထူချင်တဲ့သူ ဆံပင်အရှည်မြန်ချင်သူတွေလဲ ဒီနည်းလမ်းလေးကို လုပ်ပေးလို့ရပါတယ် တစ်ပတ်ကို … Read more
ဆံပင်တွေ နီကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေလျှင်
December 11, 2020 by Latest Myanmar News
ဆံပင်အတွက်ဆေးတလက် ဆေးနည်းက လွယ်ပါတယ်။ ဘာမှမခက်ပါဘူး။ အရင်ဆုံး အိမ်သုံးလက်ဖက်ခြောက် (အဖန်ခြောက်)ကို ဒယ်အိုးထဲထည့်ပြီး တူးခြစ်သွားအောင် လှော်ပါ။ ညက်မှုန့်နေအောင်ထောင်း ပန်းကန်ထဲထည့်ပြီး အုန်းဆီနဲ့ ဖျော်ပါ။ ထို့နောက် ဒန်အိုးထဲ ရေထည့်ပါ။ အလယ်ကောင်မှာ အုန်းဆီနဲ့ လက်ဖက်ခြောက်မှုန့် ဖျော်ထားတဲ့ ပန်းကန် ထည့်ပြီး ဆီပွက်လာတဲ့အထိ ပေါင်းပါ။ ဆီပွက်ရင် မီးဖိုမှချပြီး အအေးခံကာ လေလုံသောပုလင်းထဲသို့ ထည့်ပြီး နေ့စဉ် မှန်မှန် (၆)လလောက်လိမ်းပေးပါက ဆံပင်များ နက်မှောင်သန်စွမ်းလာပါလိမ့်မယ်။ ဖြူ သောဆံံပင်လဲ နက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဆေးဆိုးစရာ မလိုပါ။ ဆေးဆိုး၍ ဆံပင်များ နီကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေပါက ဤနည်းကို ယုံကြည်စွာလုပ်ကြည့်ပါ။ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်။ MCT Zawgyi ဆံပင္အတြက္ေဆးတလက္ ေဆးနည္းက လြယ္ပါတယ္။ ဘာမွမခက္ပါဘူး။ အရင္ဆုံး အိမ္သုံးလက္ဖက္ေျခာက္ … Read more
တစ်ပါတ်လောက်လုပ်ပေးရုံဖြင့် ကျွတ်သွားတဲ့ဆံပင်တွေကို ပြန်ပေါက်စေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း.
December 5, 2020 by Latest Myanmar News
ဆံပင်ကျွတ်တာတွေက အမျိုးသမီးတွေသာမက အမျိုးသားတွေမှာပါ တွေ့ရှိရပါတယ်နော်။ ဈေးကွက်မှာ ရှိနေတဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းတွေက ဈေးကြီးပြီး လက်တွေ့မှာ ထိရောက်မှုမရှိလို့ စိတ်ညစ်နေလား။ သဘာဝနည်းလမ်းနဲ့ အဖြေရှာကြရအောင်ပါ။ ပြုလုပ်နည်း တစ်နေ့ကို လူတစ်ဦးမှာ အနည်းဆုံး ဆံပင်အချောင်း ၅၀ ကနေ ၁၀၀ ထိကျွတ်ကြပါတယ်။ ဒါကိုစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ပါဝင်ပစ္စည်း ငှက်ပျောသီး တစ်ဝက် ကြက်ဥအနှစ် ၁ လုံး ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ဘီယာ ခွက်တစ်ဝက် ပြင်ဆင်ခြင်း ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကို မွှေစက် (သို့) ဖျော်စက်ထဲထည့်ပြီး ဖျော်လိုက်ပါ။ အဲဒီအရည်ကို ဆံပင်ကျွတ်လို့ ပါးနေတဲ့နေရာမှာ လိမ်းပေးပြီး ၁ နာရီ ၂ နာရီလောက်ထားပါ။ အဲဒီလိုလိမ်းထားချိန်မှာ ပူနွေးလာတာကိုခံစားရပါလမ့်မယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့ ဒါဟာ ဖျော်ရည်ရဲ့ အာနိသင် … Read more
ဆံပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ဆင့်ကမ်းလာကြတဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆ အမှားများ
November 8, 2020 by Latest Myanmar News
ကလေးဘဝကတည်းက ဆံပင် နဲ့ပတ်သက်ပြီး နာယူစရာ၊မှတ်သားစရာ နည်းလမ်းအဖုံဖုံကိုကြားသိပြီး အဆင့်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်လာခဲ့ကြတာ ယနေ့ချိန်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ခေတ်မီလာတာနဲ့အညီ တချို့နည်းတွေရဲ့စနစ်မကျမှုတွေကိုမြင်လာတဲ့အပြင် တစ်စုံတရာရှင်းချက်ထုတ်မပေးနိုင်၊သက်သေမပြနိုင်တဲ့နည်းအများစုဖြစ်နေတတ် တာကိုသတိထားမိပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဆံပင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူသိများနေတဲ့ လက်ဆင့်ကမ်းအတွေးအခေါ်အချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1.ဆံပင်ညှပ်လေလေ သန်လေလေ ဆံပင်ကအရင်းကနေပေါက်တာဖြစ်ပြီး အဖျားကနေပေါက်တာမဟုတ်လို့ ဆံပင်သန်နှုန်းဟာ ညှပ်တာနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါဘူး။ နောက် အများစုလက်ခံထားကြတဲ့ ဂတုံးရိတ်ခြင်းနဲ့ဆံပင်သန်ခြင်းလည်း လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဆံပင်ရဲ့မွှေးညှင်းပေါက်အရေအတွက်ဟာ မျိုးရိုးဗီဇအလိုက် သတ်မှတ်ပြီးလာတာမို့ပါ။ 2.သဘာဝအခြောက်ခံခြင်းဟာ လေမှုတ်စက်ထက်ပိုကောင်းတယ် ခေတ်ကတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာ ယှဉ်ပြိုင်အကဲဖြတ်တာတွေပေါ်လာတတ်တာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါ။တကယ်လို့သင့်ဆံပင်က ခပ်တိုတိုဆိုရင်တော့ သဘာဝအခြောက်ခံလိုက်တာ မြန်လည်းမြန်၊ကောင်းလည်းကောင်းမှာပေါ့။ဒါပေမယ့် ရှည်လျားတဲ့ဆံပင်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ အပူချိန်ခပ်လျော့လျော့လေးပေးထားတဲ့ လေမှုတ်စက်က အသင့်တော်ဆုံးပါ။ 3.ဦးရေခြောက်သွေ့ခြင်းဟာ ဗောက်ထခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်း ဒီအချက်ကတော့ လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။တကယ်တော့ ဗောက်ဟာ အဆီများတဲ့ဦးရေပြားပိုင်ရှင်တွေမှာပဲတွေ့နိုင်တာမို့ ဒီလိုမကြာခဏဗောက်ထတာကိုဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ကိုအခြေအနေဆိုးဝါးစေတဲ့ ဆီတွေမလိမ်းပါနဲ့။ 4.ဆံဖျားပျက်စီးခြင်းကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်။ ဆံဖျားပျက်စီးခြင်း၊ဆံသားကွဲထွက်ခြင်းတွေကို အထူးနည်းလမ်းတွေ၊ဆီတွေနဲ့ … Read more
ဆံပင်ပါးနေလို့ ဆံပင်တွေခဏခဏကျွတ်နေလို့ စိတ်မညစ်ရအောင် ..
November 3, 2020 by Latest Myanmar News
ဆံပင်ပါးနေလို့ ဆံပင်တွေခဏခဏကျွတ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေလား။ ဒါဆိုရင်တော့ သဘာဝနည်းလမ်းလေး ၃ သွယ်ကိုမျှဝေပေးမယ်နော်။ ကြက်ဥက ဆံပင်အတွက်ဘာတွေကောင်းတယ်ဆိုတာ အရင်ပြောပြပေးမယ်နော်။ ဆံပင်ပြန်လည်ရှင်သန်စေဖို့နဲ့ ဆံနွယ်တွေကိုတောက်ပြောင်စေတဲ့ ပရိုတင်းနဲ့ ဗီတာမင်ဓါတ်တွေအများအပြားပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်တာကို အထိရောက်ဆုံးကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိုင်အိုဒင်း၊ ဖော့စဖော့ရပ်၊ ဆီလီနီယမ်၊ သံဓါတ်တွေပါဝင်လို့ ကျွတ်သွားတဲ့ ဆံပင်တွေကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေပါတယ်။ UV ဒဏ်ကနေကာကွယ်ပေးတဲ့ ဗီတာမင် E ကြွယ်ဝစွာပါဝင်လို့ ဆံသားပျက်ဆီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးမှာပါ။ ဆံပင်ရဲ့အမြစ်လေးတွေကိုအားဖြည့်ပေးတဲ့ ဗီတာမင် B7 ပါဝင်ပြီး ဆံကေသာကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။ ဦးရေပြားယားယံတာ ဆံသားခြောက်သွေ့တာတွေကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။ ပြုလုပ်နည်း ၃မျိုးကို ဆက်ပြီး မျှဝေပေးမယ်နော်။ ၁။ ကြက်ဥနဲ့သံလွင်ဆီ ဆံပင်ကျွတ်တာကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကြက်ဥနဲ့ သံလွင်ဆီ ကိုသုံးပေးပါ။ ကြက်ဥ (၁) လုံးနဲ့ … Read more